News 18 Nepal || आज सुनको मूल्य स्थिर, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
आज सुनको मूल्य स्थिर, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटबढ नभएको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज पनि सुनको मूल्य आइतबारकै भाउमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबारकै मूल्य अनुसार छापावाल सुन तोलामा ९६ हजार १०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि आइतबारकै जति ९५ हजार ४०० रूपैयाँ छ । चाँदीको भाउ पनि आज स्थिर छ । चाँदीको भाउ एक हजार ३२० रूपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि आइतबार सुनको मूल्य शुक्रबारको तुलनामा तीन सयले घटेको थियो ।
सुनको भाउ फेरि घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
आज बुधबार, कस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
सोमबार उकालो लाग्यो सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
आज शुक्रबार, यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो, अब कति पुग्यो ?
आज बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?